Isoftware Yamahhala Ukuqhathanisa Isoftware Eyimfihlo: Ubuhle Nobubi Bakho Ngokukhetha Kwakho Kusuka kuLinux
Isoftware Emahhala Ukuqhathanisa Isoftware Eyimfihlo: Ubuhle Nobubi bawo ngokukhetha kwakho
Njalo ngonyaka ama-Technologists (Onjiniyela nabasebenzisi) aqhubeka nempikiswano ebalulekile yokuthi ngabe i-Free Software (SL) ne-Open Source (CA), ikakhulukazi yonke into ephathelene ne-duo ye-GNU / Linux, ikwazile noma izuze ngokwanele, Ukuzibeka njengenye indlela kungaba ngaphambi kwe-Private Software (SP) ne-Closed Code (CC), ikakhulukazi konke okuphathelene neMicrosoft / Apple Duo, kokubili Ekhaya nasezinhlanganweni.
Futhi umzuzu ngamunye omusha wempikiswano uletha izimpikiswano zawo ezintsha, amaphuzu wokubuka, izikhuthazo, iminikelo kanye nemiphumela engemihle. Yize kuliqiniso elingephikwe ukuthi i-SL / CA izuza ukuqondana okuya ngokwanda, ukubaluleka nezinga lokusebenziseka nabasebenzisi, kokubili Ekhaya nasezinhlanganweni. Yize ekugcineni yonke into iphela kuye ngokuthi ubuza kubani nokuthi ubani osebenzisani nokuthi yini. Akunandaba ngobuhle nobubi obungabonakala kalula kuzo zombili izinhlobo zeSoftware.
Okwalabo abahlala becwiliswa njalo Emhlabeni we-SL World, asinakungabaza ngentuthuko enkulu ebibe nayo maqondana nokusebenziseka, ubukhulu kanye nokuvikeleka, phakathi kwezinye izindawo eziningi. Ngakho-ke singaphetha kalula ukuthi konke okuthembisayo kuthembisa kakhulu.
Imodeli evulekile, ehlanganyelanayo nenemigomo yoMphakathi we-SL ngokusobala inokuningi ekunikezayo, futhi ikakhulukazi kulezi zikhathi lapho ubuciko bomkhakha webhizinisi obamba iqhaza ngokugcwele noma oyingxenye yoMhlaba we-SP / CC ubonge, waqonda, futhi wamukela futhi wavuma ngokuqinile iminikelo yoMhlaba we-SL / CA, ngendlela ebonakalayo.
Futhi yize abaningi bengakaqiniseki kangako, futhi belibala njalo noma bevimba ukuthi i-SL, futhi ikakhulukazi iLinux, ayikabi yi-de facto Desktop yamakhompyutha amaningi wabasebenzisi abaningi, amakhaya namabhizinisi, amathuba okuphumelela aqhubeke nokukhula ukuze i-SL ne-GNU / Linux zinqobe kuDeskithophu yomsebenzisi ojwayelekile nowamanje.
Ngamafuphi, impela kule minyaka eyishumi ezayo sizobona wonke amaKhaya nezinhlangano ezinamapulatifomu ekhompyutha asuselwa emiqondweni ye-SL / CA., ikakhulukazi njengoba ukwabiwa kolwazi kanye nokwenziwa okusha ngokuhlanganyela kusabalele.
Izindleko zokutholwa okuphansi: Ukutshalwa kwemali kokuqala ku-SL / CA kuncane kakhulu kune-SP / CC. Ezingeni lomsebenzisi kuzoya nge-Distribution ekhethiwe ye-Linux. Ezingeni lamaSeva, kuzohlala kunokulondolozwa okuphawulekayo ngenxa yelayisense le-OS ne-System efakiwe.
Ukutholakala kwekhodi yomthombo: Ukutholakala okungenamkhawulo noma okungenamkhawulo nokufinyelela kukhodi yomthombo ukwenza ukulungiswa okudingekayo, ukuguqulwa, ukulungiswa noma ukulungiswa ngokusebenzisa abahleli bethu.
Ukusekela Okuhle kakhulu: Umphakathi omkhulu olungele ukunikeza izixazululo noma imibhalo kuzo zonke izinhlobo zezimo nge-SL / CA. Ngaphezu kwalokho, kusuka kwinani elikhulu lezincwadi ze-elekthronikhi, uhlu lwama-imeyili ngosizo olutholakalayo.
Ukuzinza okuhle nokuphepha: Izinhlelo Zokusebenza kanye Nezicelo ezisuselwa ku-SL / CA zivame ukuba sengozini yokuthola iSoftware enobungozi efana nama-virus, i-malware, i-spyware, i -hlengware, phakathi kwabanye.
Ukuxhumana okuhle kakhulu: Kubandakanya ukusebenza okudingekayo kokuxhuma namanye amapulatifomu okuphathelene, ukuze kuhlanganiswe kahle nezimo ze-IT zamanje.
Ithuba lokusebenzisa i-Hardware efinyeleleka kalula: I-SL / CA ivame ukusebenza njenge-HW yakudala noma yesimanje kepha ingenzi kahle (ishibhile), ngakho-ke ukukhuphukelwa ku-SL / CA akusho kuzindleko ezintsha zesimanje noma zamanje ze-HW.
Kulula ukufaka: Ngokuvamile, ama-Operating Systems Nezicelo zanamuhla ezenzelwe i-SL / CA zingaqala ukusebenza ngemibuzo embalwa nje nangesikhathi esifushane sokusetha / sokusetha.
Ukungahambelani ne-SW / HW ethile: Akuwona wonke ama-SW / HWs anokusekelwa noma ukuhambisana kwe-SL / CA, kepha igebe elinawo lincipha ngokuhamba kwesikhathi, futhi cishe kunezinye izindlela ezizwakalayo.
Ijika lokufunda elide: Njengamanje, ama-Operating Systems nezicelo ezisuselwa ku-SP / CC zisetshenziswa kabanzi, kokubili Ekhaya nasezinhlanganweni, ngakho-ke abasebenzisi abasha ku-Operating Systems and Applications based on SL / CA bangadinga ukuqeqeshwa okwengeziwe nangcono, esikhathini esidala.
Ukumelana Noguquko Kwithalente Lomuntu (Abasebenzisi, Ochwepheshe kanye Nabaphathi): Ekuqaleni futhi ikakhulukazi abasebenzisi bazoba nezinkinga ukwamukela noma yiluphi ushintsho, ukugwema imizamo emikhulu yokufunda nokuzivumelanisa nezimo. Lokhu futhi kuvame ukwenzeka ezingeni labasebenzi abathile be-IT. Ezingeni lamaBoss, umthelela ezingeni leTime / Productivity uvame ukucatshangelwa ezimweni lapho inqubo yokuqalisa ingalawulwa kahle.
Ukusekelwa okukhethekile ku-Multimedia and Entertainment: Kwezinye izimo, abasebenzisi abasezingeni eliphakeme noma abakhethekile ekusetshenzisweni kwama-Operating Systems kanye ne-Applications asuselwa ku-SP / CC ethile yokuPhathwa / Ukusetshenziswa kokuqukethwe kweMultimedia noma Imidlalo kaningi kuyenza kube nzima ukwenziwa kohlelo oluphumelelayo nolukhulu lwe-Operating Systems and Applications olususelwa ku-SL / AC. Izikhathi eziningi ngokuxhaswa okuhle kulokhu ngoba kulezi zimo i-SP / CC imvamisa isenezinzuzo ezibalulekile.
Umhlaba we-SL / CA unezinzuzo eziningi ezibalulekile zokukala umhlaba we-SP / CC. Kodwa-ke, phakathi kwezinto eziningi, isibonelo, akufanele kukholwe njenge-priori ukuthi ukusetshenziswa kwezinhlelo ze-SL / CA kuzosongela imali noma izindleko eziphansi kusukela ngosuku lokuqala lokuqalisa nokusetshenziswa. Kepha ngokuqinisekile uma okufunayo ukuthola inzuzo enhle ekutshalweni kwemali (i-ROI) bese wonga imali ngokuhamba kwesikhathi, ukusetshenziswa kwe-SL / CA kungaba yindlela enhle ongayibheka.
Amaphuzu aqinile afana imali ezotholakala kuzindleko zamalayisense kanye nomthelela ophansi wezinkinga nesikhathi sokuphumula kubangelwa i-malware nezinye izinhlelo ezinonya lezo isinika i-SL / CA Bathanda impumelelo yangempela kunoma yikuphi ukufuduka okufanele kwenziwe ngaphansi kokuhleleka okuhle.
Ngenisa izinhlelo ze-SL / CA namapulatifomu ngezigaba, Njengoba abasebenzisi bejwayela ukusebenzisa iningi lalezi zinhlelo zokusebenza ngaphansi kweWindows / Mac-OS ngenxa yesimo sabo se-multiplatform, kungaba isu eliwusizo ukuze ukutholwa kokugcina nokuphelele kwe-SL / CA akuyona into eshaqisayo noma engabekezeleleki.
I-Long Live Free Software noMthombo Ovulekile.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » eziningana » Isoftware Emahhala Ukuqhathanisa Isoftware Eyimfihlo: Ubuhle Nobubi bawo ngokukhetha kwakho
I-WiPhone - Umthombo ocingweni ovulekile owenziwe ngezifiso nge-EDI
ILinux Foundation imemezele ukwengezwa kwamalungu amasha angama-34